Apply for Senior Procurement – Female (5) Assistant Engineer (PLC) – Male/Female (5) Engineer (PLC) – Male (5) Posts (0Ks) in Yangon on ipivi.com
Senior Procurement – Female (5) Assistant Engineer (PLC) – Male/Female (5) Engineer (PLC) – Male (5) Posts
Seller: Bo Ma Yoke
Active on site: 31 days
Views: 65 (+ 1 )
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော သီလ၀ါစက်မှုဇုန်ရှိ Manufacturing Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1. Senior Procurement – Female (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / သီလ၀ါစက်မှုဇုန် • Bachelor degree
• At least2years of experience in related filed
• Proficiency in Microsoft Excel, Word
• Strong English communication and presentation skills
• Strong and proven communication, negotiation skills
• ဖယ်ရီရှိသည်။ ယူနီဖောင်းရှိသည်။
• အလုပ်ချိန် (8:00 – 5:30)
• စနေတစ်ပတ်ခြား၊ တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။
• လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ 2. Assistant Engineer (PLC) – Male/Female (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / သီလ၀ါစက်မှုဇုန် • BE (EP, EC, MP)
• PLC Certificate Holder
• Age under 28 years old.
• လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ 3. Engineer (PLC) – Male (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / သီလ၀ါစက်မှုဇုန် • BE (EP, EC, MP)
• At least (1)year and above of related field
• Age under 35 years old
• လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101 , 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Name: Senior Procurement – Female (5) Assistant Engineer (PLC) – Male/Female (5) Engineer (PLC) – Male (5) Posts
Active on site 31 days